Flash Claim Nezve Beşikdüzü Cable Mota Zvivako | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYTurkish Black Sea Coast61 TrabzonFlash Claim Nezve Beşikdüzü Cable Mota Zvivakwa
22 / 05 / 2020 61 Trabzon, GENERAL, Gondola, Turkish Black Sea Coast, musoro wenyaya, TURKEY, TELPHER
Flash bango maererano besikduzu cheni yemotokari zvivakwa
Mutungamiriri weTrabzon Mutezo weMutungamiriri weParamende Beşikdüzü Ozturk, anonzi akaputsa chibvumirano chekambani yemotokari yemagetsi muBeşikdüzü.
Ozturk akati; "Beşikdüzü cable yemotokari kambani haizadzise zvisungo zvayo pasi pechibvumirano Mabhizinesi anoitirwa muchivako. Zvinoenderana nechinyorwa chechinomwe chechibvumirano, zvikamu gumi neshanu muzana kubva muzana zvemabasa awakaita muna 7 hazvina kubhadharwa neMunharaunda kusvika musi wa2019 Chivabvu 18.1. Uye zvakare, kambani bilançoyu kupera kwaKubvumbi 15, "iyo yaisafanirwa kupa. Ini ndinoratidza mamiriro ezvinhu kuvanhu vedu. "Hapana anoti hapana mari."
Önder Öztürk akagovana zvinyorwa zvinotevera;
1- Mamirioni mazana matatu TL yakashandisirwa nzvimbo dzekuchengetera mota, iyo yakazopedzwa neBeşikdüzü Municipality muna 2018, uye mamirioni makumi matatu neshanu TL yemari iyi yakafukidzwa neIller Bank nechikwereti chakaderera chemari nemakumi gumi nemashanu emakore, uye zviwanikwa zvegavhuna nemagrukota zvakasangana.
2- Iine zvinyoro zvinyoro zvakagadziriswa neMunharaunda yeBeikikdüzü, ithenda yakavhurwa pasi pezita rekuti "Kuvakwa kweCable Car Facility neHotera uye Commerce Zvigadzirwa uye Kusevenza Kwemakore makumi matatu nemaviri muBeikikdağ Tourism uye Natural Sports Center" uye tendero yakaramba iri pakambani inonzi GİZTAŞ A.Ş. Yasainwa.
3- Sezvo zvakaonekwa kuti kambani yeGiztaş A.Ş haina kuzadzisa zvisungo zvayo pasi peTender Spendi uye Chibvumirano mushure memwedzi mishoma, kubviswa kwechibvumirano kwacho kwakazosvika nekuda kwezvaifarirwa neBeşikdüzü Municipality nevanhu vayo maererano nezvinyorwa zvinoenderana nechibvumirano.
4- Sezvo Giztaş A.Ş kambani yaizivikanwa kuti yakanga yakunda Terenda nyowani yeMapurisa yeAfyon pamberi peBeikikdüzü, zvainzwisiswa kuti matare ehukama akabatana nesu mumataundi ese maviri. Idzi sarudzo dzemapurisa mbiri dzemusi wa 30 Kurume 2019 ratidzo pamusoro pechitsvagirwo chekambani, vakatora nzvimbo mushure mekodzero yekushandisa uye vaita TERMINATION maitiro. Mubatanidzwa wekambani iyi, iyo inosvika mamirioni gumi TL, yakapihwa kumapurovhinzi, inonyorwa semubhadharo wemapurovhinzi.
5- Panguva yekumiswa basa kweBeşikdüzü Municipality, kambani yeGiztaş yakazivisa kuti inoda kushandisa sarudzo yeCONON RECEPTION, iri nekuda kwechibvumirano. Chibvumirano chitsva chakasainwa nekambani inonzi AFRİNA nekuzvipira kuti ivo vachazadzisa zvisungo mune zvakatemwa uye chibvumirano, uye chibvumirano chitsva chakasainwa neMunharaunda, Giztaş uye Afrina.
6- Muridzi wekambani iyi Afrina aive mugari weSaudi Arabia. Mukuwirirana nechibvumirano, akabhadhara iyo TL mamirioni gumi kuna Beşikdüzü Municipality, kusanganisira iyo yakawedzera mubereko. Pamusoro pezvo, kuvakwa kwenzvimbo yekupaka nemahara achitenderedza chiteshi chezasi kwatanga, uye chiteshi chepamusoro chakatanga kuvakwa kweInternet-yakavakirwa hotera yakavakwa neMunharaunda kusvika 10. Aya ndeimwe emabasa anomanikidzirwa mune zvakatemwa nyowani.
7- Uye mushure mesarudzo dzemusi waKurume 30, 2019, iyo Management Administration, iyo yakatanga kutonga pasarudzo, yakabhadhara Kambani yeTeleferik nemiriyoni imwe yeTL isina chikonzero. Mukuwedzera, mazwi asina kunaka akaitwa naMayor kune vanochengetera maArabhu muTrabzon Metropolitan Municipality Assembly (Rega dombo riunganidze uye visiye muzinga. Vasiyei vobva Beşikdüzü.) Pakabatanidzwa mumapepanhau, muArabhu akasiya nzvimbo inozivikanwa yemotokari yemagetsi uye akasiya Beşikdüzü. Nekudaro, iyo yemota cable yekushanda yakaramba iine naGiztaş, mumwe waakabatana naye. Zvichakadaro, zvikamu zviviri muzvitatu zvemutongo wakatemerwa Chivabvu 2020 zvakaunganidzwa neruware.
8- Pakabviswa mumwe wavo wechiArab, zvese kuvaka kwakamiswa. Asi izvo, kunyange kana kuumbwa nesimbi yeimwe pasi pehotera pamusangano wacho zvakasunganidzwa, chigadzirwa ichi chakatengeswa kune chikamu chidiki chekupwanya simbi munzvimbo yakavakirwa kuvaka uye simbi yewicker yakarukwa mudura.
9- Kunyangwe yambiro dzese uye yambiro yevashandi vehunyanzvi vekanzuru, kambani inoshanda haina kuzadzisa chero zvisungo zvekuitwa maererano neContrakti. Mari yakakwana yemabasa anofanirwa kuitwa ndeyemamirioni makumi maviri neshanu .. Neichi chirevo, Meya Ramis Uzun Bey akaunzwa. Huya muna Zvita 20, kambani yakapihwa kwemwedzi mitanhatu yekuwedzera iyo Shopping Center, iyo inofanirwa kuitirwa kune sub-station. Kubva muna Chivabvu 2019, ikozvino, mvura yemasumbu yakadururwa mukugadzirwa uku. Kuwedzerwa kwenguva ino hazvisi pamutemo zvachose. Zvakare, kambani yakawana Cable Car Operations pamamiriro ekupedza mabasa ari kuitwa pachiteshi chekumusoro kupera kwaJune 2020. Asi nanhasi, kunyange zvipikiri hazvina kurovererwa.
10- Ikozvino kanzuru yeManagement manejimendi kana ichaita zvakanaka kuenderera mberi Afyon Municipality yeKocaeli neKartepe ichachengetedza kodzero yevagari vemo, sekuitisa kwakaitwa kambani matarenda ekisheni mari yakapihwa neTender Sporifomu uye TERMINATION maitiro sezvaidikanwa nechibvumirano chakasainwa naFira? Zvikasadaro, mamiriro akaita Sachigaro nenhengo dzeParamende pamwe neDare reAccount Auditor kuti riitwe mu Ministry of Interior ndiko kubuda semhosva Malpractice uye Ruzhinji Kurasikirwa kuchamirira mhosva yekukundwa kwakundwa. Kurasikirwa kweruzhinji kuchaitika kucharemerwa kune avo vane hanya. Tichamirira toona. (Source: Chinyorwa 61)
3 kubva kuCP Pekşen. Chiitiko Chinofadza pamusoro peZita reIndaneti
Iyo Inoshamisa Inofambisa Njodzi YHT: UM 2 Yakasiyana Nengozi Yakaitika Yakatariswa Y
Çorlu'da Chitima Njodzi Yakatemerwa Kukuvara! .. Vapomeri vakaunganidza humbowo
Kudzivirira makamera eTarsus Train Station
TCDD'den Shock Claim Duty Promotion Mibvunzo yeMibvunzo Inoparadzirwa
CHP Attorney Shock Claims "Nhamba ye41 Kufa muNjodzi Yenzira muTekirdag"
Beşikdüzü anosarudza muenzaniso wekambani yemotokari yemotokari
Beşikdüzü ropeway project yakagamuchira migumisiro mikuru
Besikduzu Kushandisa Mutambo Kwekukwira Fast
Kunakidza Kufambira muBesikduzu Cable Car Project
Town of Beşikdüzü
Besikdag Tourism uye Outdoor Sports Center
Giztaş A.Ş solid
Trabzon Rail system inotarirwa pakati peBesikduzu neO
Karadeniz's Longest Distance Besikduzu Cable Car Project Yakapedzwa